mcwill internet line နဲ့ mpt adsl line — MYSTERY ZILLION
mcwill internet line နဲ့ mpt adsl line
mcwill internet line နဲ့ mpt adsl line ပေါင်းလို့အဆင်ပြေလား၊အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးချင်လို့ပါ၊adsl ကနှေးလွန်းလို့ mcwill နဲ့တလှည့်စီသုံးချင်လို့၊ router ဘယ်နှစ်လုံးသုံးရမှာလဲ၊clients proxy setting ဘယ်လိုထားရမှာလဲ၊ဖြေပေးကြပါ၊
Try to use this UTM device.(Cyberoam) CR 25ia. It only cost 595$. you can configure3WAN Port (Internet Link) . Control to user is perfect. It is quite secure firewall also ( depend on Engineer who handle the firewall ).
ADSL ကိုဘယ်လိုင်းနဲ့မဆိုပေါင်းလို့ရပါတယ်။ MPT ADSL က ygncache.mpt.net.mm ဆိုတဲ့ ဟာကြီးသုံးထားတော့တစ်ချို့တွေကပေါင်းလို့မရဘူးထင်ကြတယ်လေ။ တကယ်တော့ရပါတယ်။ MPT ADSL ကို No Proxy ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ TP-Link ရဲ့ Load Balancing Router ရယ် ရိုးရိုး TP-Link Router ရယ်ရှိရင်ရပါတယ် အားလုံးပေါင်းကုန်ကျငွေကတော့ ၁ သိန်းတောင်မပြည့်ပါဘူး။ ဟဲဟဲ လုပ်နည်းလေးကတော့ ၁ သိန်းကဘူးနော်။ စိတ်၀င်စားရင် ဖုန်း ၀၉၄၃၁၆၅၂၂၆ ကိုဆက်သွယ်ပါဗျာ။